Postado Monday, August 19, 2013 at 10:39 AM
ကောင်လေးက သူ့ချစ်သူကောင်မလေးဆီ sms ပို့လိုက်တယ် …
Girl ။ ။ မရဘူး … ဒါကို အပြီးလုပ်ရမှာ …
Boy ။ ။ ကျေးဇူးပြုပြီး တောင်းဆိုတာပါ … ဒါကို နင် နောက်နေ့ပြီးအောင် လုပ်နိုင်မှာပါ …
Girl ။ ။ ဘာလဲ?? နင်က ငါ့အခြေအနေကို နားလည်မပေးတော့ဘူးလား … ငါ့မှာလည်း ငါ့ဘ၀နဲ့ငါရှိသေးတယ် … အခုလောလောဆယ်တော့ ငါတယောက်ထဲ နေပါရစေ … SMS ဆက်မပို့နဲ့တော့ … ဒါဘဲ!!
Boy ။ ။ Sorry Baby … I love you … အရမ်းချစ်တယ် … နောက်မှပဲ SMS ထပ်ပို့လိုက်တော့မယ်နော် …Bye
Boy ။ ။ ည ရှစ်နာရီ ရှိနေပီ … ငါနင့်ဆီ SMS မပို့ဘဲ အကြာကြီး မနေနိုင်ဘူး … ငါနင်နဲ့ စကားတွေပြောချင်တယ် …
Boy ။ ။ ငါ့ SMS တွေ Reply ပြန်မလုပ်ဘူးနော် … နင့် Thesis အတွက်လုပ်နေတာ ပြီးသွားပြီလား ??
Boy ။ ။ ကျေးဇူးပြုပြီး Reply လုပ်ပါကွာ .. ငါ စိတ်ပူလာပီ!!
Boy ။ ။ ဆယ်နာရီတောင်ထိုးသွားပီ … ငါနင့်ဆီ SMS ပို့နေတာ နှစ်နာရီတောင်ရှိနေပီ … နင်ငါ့ကို Reply လေး တစ်ခုတောင် မလာဘူးနော် … ငါနင့်ကို အရမ်းလွမ်းတယ် … အရမ်းလည်းချစ်တယ်!!
Boy ။ ။ @_@ နင်နေနိုင်လိုက်တာနော် … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နင့်ဘေးမှာငါ အမြဲရှိနေမှာပါ … ငါနင့်ကိုအရမ်းချစ်တယ်!!
Girl ။ ။ ငါ့ဆီ SMS မပို့နဲ့တော့လို့ ငါမှာထားတယ်မှတ်လား … ငါ Thesis ပြီးတဲ့အချိန် Reply ပြန်လုပ်မှာပေါ့ … နင်ဒါကို နားမလည်ဘူးလား?? ငါမအားဘူးဆိုတာကို လက်ခံပေးဖို့ အဲ့ဒီလောက်တောင် ခက်ခဲနေလား?? နင့်အတွက် မနက်ဖြန်ဆိုတာ မရှိတော့သလိုပဲ … သိပ်ပြီးတော့ Over ဖြစ်မနေနဲ့ .. နင် အိပ်ပျော်အောင် အိပ်သင့်နေပီ!!
Boy ။ ။ နင့်အတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားလို့ ငါတောင်းပန်ပါတယ် … နင်အိပ်စေချင်ရင် ငါအိပ်ပါတော့မယ် … Good Night Baby … အရမ်းချစ်တယ်!! နင့်ကိုယ်နင်လည်း အမြဲတမ်း ဂရုစိုက်နော် … ငါနင့်ဘေးမှာနေပြီး အမြဲတမ်း လမ်းပြပေးနေမှာပါ ... ငါတကယ်ကိုပဲ နင့်ဘေးမှာပဲ ရှိနေမှာပါ … နင့်ကို ဘယ်တော့မှ ထားခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး !!
Girl ။ ။ နင်နိုးနေပြီလား?? မနိုးသေးရင် ထတော့လေ!! ငါမနေ့ညက ပြောခဲ့မိတာတွေ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် … ငါတကယ်ကို အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ပါ… မနက်စာထစားတော့နော်, ငါလည်း ကျောင်းသွားရတော့မယ် …
Girl ။ ။ မထသေးဘူးလား?? အတန်းချိန်နီးနေပြီလေ … နင်နိုးရင် ငါ့ကို reply ပြန်လုပ်ဦး!!
Girl ။ ။ Hey!! ဘာလို့ခုထိ reply မလုပ်သေးတာလဲ?? နေ့လည်စာစားချိန်တောင် ရောက်နေပြီ … နင်ဘာလို့ အတန်းမတက်တာလဲ?? နင် Ph Bill ကုန်နေပြီလား?? ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ကိုဆက်သွယ်စမ်းပါဟာ …
Boy ။ ။ သမီးချစ်သူက သူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေ အားလုံးကိုထားခဲ့ပြီ … သူနေမကောင်းတာ သမီးမသိဘူးလား?? သူ့ကို သုံးနှစ်ပဲနေရတော့မယ်လို့ ဆရာဝန်ကပြောထားတယ်လေ … မဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ အန်တီတို့လည်း ဆုတောင်းခဲ့ကြတာပဲ သမီးရယ် .. ဒါပေမယ့် သူ့နှလုံးက အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေ … ဒီနေ့မနက် အန်တီသူ့ကိုနိုးတဲ့အခါ သူအသက်မရှိတော့ဘူး သမီးရယ် …
ဒါကတော့ သမီးအတွက်ဆိုပြီး သူရေးခဲ့တဲ့ message လေးပါ … သူကိုယ်တိုင်တော့ မပို့နိုင်ရှာတော့ဘူးပေါ့ကွယ် ..
“နင့်ကိုယ်နင် အမြဲဂရုစိုက်ပါ … ငါဘယ်ဘ၀ကိုပဲရောက်ရောက် ငါပျော်ပါတယ်…ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့အတွက် မငိုပါနဲ့!! ငါ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို နင့်ကိုမပြောပြခဲ့တဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် .. နင် thesis အတွက် အလုပ်တွေရှုပ်နေတော့ ငါ့ကိစ္စကြောင့် နင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ .. ငါနင့်ကို မစိုးရိမ်စေချင်ဘူး … နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ မနိုးထနိုင်တော့မှာ စိုးလို့ ငါညတွေဆို အိပ်ရမှာ ကြောက်တယ် .. အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရင်လည်း နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ နင့်ကိုတွေ့ခွင့်ရပါစေ .. နင်နဲ့အတူရှိခွင့်ရပါစေလို့ ငါအမြဲဆုတောင်းတယ် … ငါနင့်ကိုအရမ်းချစ်တယ် .. ဒီနေ့အတွက် နင်နဲ့စကားအများကြီးမပြောရလို့ ငါအရမ်းဝမ်းနည်းတယ် … ဒါပေမယ့် ငါနင့်ကိုနားလည်ပါတယ် … နင် thesis မပြီးလို့မဖြစ်ဘူးလေ .. ငါနင့်ကိုအရမ်း အရမ်းချစ်တယ် … အမြဲတမ်း ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ ရပ်တည်သွားမယ်လို့ ငါ့ကိုကတိပေးပါ .. ငါအခုနင့်ဘေးမှာ ရှိနေတယ်…အမြဲတမ်းလည်း ရှိနေမှာပါ …”
ကြိုမမြင်နိုင်တဲ့ မနက်ဖြန်မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီး ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက် သင်ချစ်တဲ့သူကို တတ်နိုင်သမျှ အရာအားလုံးထက် ပိုပြီး ဦးစားပေးသင့်ပါတယ် ...
Credit to Aung Kyaw Tun
Copy from ရွှေသတင်းသစ်
ကင်တားနား၏ သဘောထားမှန်ကို သုံးသပ်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနား အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့တာ ယခု တစ်ကြိမ်နဲ့ဆိုရင် (၇) ကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ် (၆) ကြိမ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကင်တားနားက ဘက်လိုက်
ကြောင်း ဝေဖန်သံများ မြန်မာလူထုအကြားမှာ သိသိသာသာ ကြားလာရပါတယ်။ ရခိုင်အရေးအခင်း ဖြစ်ပြီး မကြာခင် ကင်တားနား ရောက်ရှိလာရာ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များကို မတွေ့ဘဲ ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များနှင့်သာသီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်လူထုကို လူဆိုးလူမိုက်များအဖြစ် တစ်ဖက်သက် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘင်္ဂါလီဟု မသုံးနှုံးဘဲ ရိုဟင်ဂျာ ဟု သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။
ကင်တားနားရဲ့ ဘက်လိုက်မှုတွေကို ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေက ကိုယ်တွေ့ခံစားရသူတွေ ဖြစ်လို့ အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိပက္ခကြောင့် ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ အကူအညီတွေ လာတယ်ဆိုတာကြောင့် ရခိုင်ဒုက္ခသည် များ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပေမယ့် ကင်တားနားရဲ့ ဘက်လိုက်မှုတွေကို သိရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များဟာ ကုလ NGO တွေ က ထောက်ပံ့တဲ့ အစားအစာနဲ့ ဆေးဝါးတွေကို တောင် မယူတော့ဘဲ အငတ်ခံကြရတဲ့အထိ ဖြစ်လာပါတယ်။ရခိုင်ပြည် နယ် ဟာ ပြည်မကြီးနဲ့ သွား၊ လာရတာ အလွန်ခက်ခဲပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအများစုမှာလည်း ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့သာ ရပ်တည်နေထိုင်ကြရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု ဒဏ်ကို လည်း အများဆုံးခံစားရသူများဖြစ်ပေမယ့် ရခိုင်တိုင်းရင်သားတို့ စိတ်မပျက်ခဲ့ကြပါဘူး။ အခုနောက်ဆုံး ဘင်္ဂါလီ ဒဏ်ကို အနှစ်နှစ်အလလ သည်းခံခဲ့ပြီး လုံးဝမခံ စားနိုင်တော့လို့ ပွင့်အန်ထွက်လာကြတာပါ။ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနား ကတော့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးကို လစ်လျူရှုထားပါတယ်။မသီတာတွေး ကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး အသတ်ခံရ မှု၊ စစ်တွေတက္က သိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦး အသတ်ခံရမှု၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ နေအိမ်များ မီးရှို့ခံရမှုများအတွက် လူသားချင်းစာနာဖို့ တစ်စုံတစ်ရာ ပြောဆိုခဲ့ခြင်း
မရှိပါဘူး။ ဘင်္ဂါလီများ ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း အချင်းချင်း မုဒိန်းကျင့်နေမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှုများ ရှိနေတာကိုလည်း မျက်ကွယ်ပြုနေခဲ့ပါတယ်။
ကင်တားနား အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းပါ အချက် (၃၀) နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ဘဝကိုတိုင်းတာခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က မွတ်ဆလင်နိုင်ငံအသီသီးက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေတာကိုတော့ ၎င်း နဲ့ မသက်ဆိုင်သကဲ့သို့ တစ်ခွန်းမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်လုပ်နေတဲ့ ကင်တားနားဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်း နဲ့ ဥပဒေ ကိုတော့ လေးစား ဖို့လိုပါတယ်။ ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီလတွင် (၅) ကြိမ်မြောက်ခရီးစဉ်မှာ ကင်တားနားမှ ဘင်္ဂါလီ များကို မြန်မာတိုင်းရင်း သားအဖြစ်လက်ခံဖို့ အစိုးရကို ဖိအားပေးလာရုံမျှမက ၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ ကိုပါ ပြင်ဆင်ဖို့ ပြောလာ ရာ မြန်မာလူထုတစ်ရပ်လုံး ဒေသအမျက် ချောင်းချာင်းထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးမှ ဒုက္ခသည်များ ကို ကုသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးမှခွင့်ပြုလျှင် တတိယနိုင်ငံများသို့ တဖြည်းဖြည်းပို့ဆောင်ပေးဖို့ ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် အစိုးရကို ဖိအားပေးလို့မရချိန်မှာ လွှတ်တော် ဘက်ကို ကင်တားနား လှည့်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။နေပြည်တော် သို့သွားရောက်ပြီး အထက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ဒုဥက္ကဌနဲ့ ကော်မတီ (၁၂) ခုက ဥက္ကဌ တွေနဲ့ တွေ့ချိန်မှာ ကင်တားနားမှ တည်ဆဲဥပဒေတွေ ကို ပြင်ဆင်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပြန်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ မှ ကင်တားနား အစား အခြား ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ပြောင်းခန့်ဖို့အထိ တောင်းဆိုမှုကို ကြေညာချက်တစ်ခုအဖြစ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကြေညာချက်တွင် ကင်တား နား မှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဒေသခံပြည်သူများ၏ဆန္ဒကို အလေး မထားဘဲ တစ်ဖက်သတ် ပြောဆိုသွားကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာဟု မသုံးရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း၊ ဘူးသီးတောင် နှင့် မောင်းတောတွင် အဆမတန် လူဦးရေပေါက်ပွားမှုကြောင့် ရခိုင်ဒေသခံတွေ ဒုက္ခရောက်နေသည်ကို ကင်တားနား မှ လူသားချင်းစာနာမှု လုံးဝမရှိတဲ့အပြင် ကုလလက်အောက်အဖွဲ့များနဲ့ INGO များက ခိုးဝင် လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီများကို တစ်ဖက်သက် ကူညီနေကြကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်အချင်းချင်းပင် ခွဲခြား ဆက်ဆံနေ ကြောင်း၊ ၈၂ နိုင်ငံသားဥ ပဒေပြင်ဆင်ဖို့ တောင်းဆိုခြင်းက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေပြုခွင့်အာဏာကို ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ရာရောက်နေကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည် နယ် တွင်ပြဿနာများတွင် ပဋိပက္ခဇစ်မြစ်ကို မသိဘဲ တစ်ဖက်သက် အမြင်နဲ့ ဖိအားပေးပြောဆိုနေသဖြင့် သမာသမတ်ကျသည့် အထူးကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ပြောင်းလဲ တာဝန် ပေးရန် တောင်းဆိုပါကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုဇာဂနာ ၊ ကိုကိုကြီး တို့ပါဝင်တဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှ စနစ်တကျ အချိန်ယူ လေ့လာစုံစမ်းပြီးနောက် ရလဒ်များနဲ့ အကြံပြုချက်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၃ မေလ တွင် ကင်တားနားက အဆိုပါ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရလဒ်ကို ကန့်ကွက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ကင်တားနား၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဘင်္ဂါလီများ (၄င်းအဆို ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်များ) သည် အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရသဖြင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့သည်ဟု ဆိုထားပြီး ဘင်္ဂါလီများ လွတ်လပ်စွာသွားလာ ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ကော်မရှင်က အကြံပြုထားခြင်း မရှိကြောင်း ဝေဖန်ထားကာ ဘင်္ဂါလီများ နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးအတွက် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေကို ပြင်ဆင် ရမည်ဆိုသောမှတ်ချက်များ၊ ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဘင်္ဂါလီခေါင်းေ ဆာင်
ဒေါက် တာ ထွန်းအောင် ကို လွှတ်ပေးရမည်ဆိုသော ပြောဆိုချက်များ ပါဝင်ပါတယ်။
လူသားချင်းစာနာဖို့ နဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ ပါးစပ်က မချသော်လည်း မိတ္ထီလာတွင် ဦးသောဘိတ ရက်ရက်စက်စက် အသက်ခံရမှု၊ လားရှိုးတွင် မအေးဝင်း ဓာတ်ဆီလောင်းမီးရှို့ခံရချိန်၊ မလေးရှားမှ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူနည်းစုအကြမ်း ဖက်ချိန်များမှာတော့ ကင်တားနား နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်။ ကင်တားနား၏ သိသိ သာသာ ဘက်လိုက်မှုများကြောင့် ၂၀၁၂ ဇွန်လ နောက်ပိုင်း ခရီးစဉ်များတွင် မြန်တိုင်းရင်းသားများက ဆန္ဒပြ မှုများ အမြဲလိုလို ကြုံခံ့ရပါတယ်။ မန္တလေးတွင် ဆရာတော်များဦးဆောင်က သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ထောက်ခံကြောင်းနဲ့ ကင်တားနားကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ UN ရုံးရှေ့တွင်လည်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ယခု ၂၀၁၃ သြဂုတ်လ ခရီးစဉ်တွင်လည်း စစ်တွေမြို့အဝင်ကတည်းက ဆန္ဒပြနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်တားနားအရေးသည် အမျိုးသားရေးဖြစ်ပြီး ရခိုင်များကိုဖိနှိပ်ပြီး ဘင်္ဂလီများအပေါ် ဘက်လိုက်မှုကလည်း မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော အရေးဖြစ်ပါတယ်။
ကင်တားနား အနေဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံများ၏ အထောက်ပံ့ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာအစိုးရကို အတိုက် အခံလုပ်လို၍သော်လည်းကောင်း၊ UN နှင့် အမေရိကန်တို့၏ မူဝါဒအရသော်လည်းကောင်း တစ်ဖက်သက် ဘက်လိုက် ကာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများကို ဖိနှိပ်ပြီး ဘင်္ဂါလီကို နိုင်ငံသား သတ်မှတ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးရန်တာဝန်မှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေသာမကဘဲ မြန်မာလူထုတစ်ရပ်လုံးမှာ တာဝန်ရှိ ပါတယ်။ ကင်တားနားအစား အခြား သမာသမတ်ကျသူ တစ်ဦး (သို့မဟုတ်) မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ အခွင့် အရေးနဲ့ ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာသူတစ်ဦး ပြောင်းလဲခန့်ထားစေဖို့ ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြရန်နဲ့ ကင်တားနားကို ရောက်လေရာ အရပ်မှာ ဆန္ဒပြကြဖို့ လိုပြီဖြစ်ပါကြောင်း တိုက် တွန်းရေးသား လိုက်ရပါတယ်။
Copy from www.MyanmarExpress.net
ကိုယ်ဝန်တားဆေး Ecee2ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ရန်ကုန်
(မ.......) တစ်ယောက် လမ်းလျှောက်ရင်းဖြင့် လက်ပတ်နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၁၀ နာရီ ထိုးပြီဖြစ်သဖြင့် ဆေးကဒ်အတွင်းမှ လက်ကျန် ဆေးတစ်လုံးကို ထုတ်သောက်လိုက်သည်။ ဆေးနှစ်လုံးသာ ပါသည့် ဆေးကဒ်က ကုန်သွားပြီဖြစ်သဖြင့် လွှင့်ပစ်လိုက်တော့သည်။
သူမသောက်လိုက်သည့် ဆေးသည် ပျိုရွယ်သူ များအကြား အသိများသည့် Ecee2 ဟု ခေါ်သော သန္ဓေ တားဆေးဖြစ်သည်။ ထိုဆေးကို အရေးပေါ်သန္ဓေ တားဆေးအဖြစ် လူသိများပြီး လိင်ဆက်ဆံပြီး ၇၂ နာရီ အတွင်းသောက်ပါက ကိုယ်ဝန်မရပေ။ မနေ့ည ၁၀ နာရီက ပထမဆေး တစ်လုံးကို သောက်ပြီးပြီဖြစ် သည့် အတွက် နောက် ၁၂ နာရီအကြာ မနက် ၁၀ နာရီတွင် ထိုဆေးကို သူမသောက် လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယမန်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းကတော့ သူမနှင့် သူမ၏ ချစ်သူတို့ ယနေ့ခေတ်တွင် လက်မထပ်မီ လိင်ဆက်ဆံခြင်း ကိစ္စကလည်း မဆန်းတော့ပြီဖြစ်သည်။ "ရည်းစားဖြစ်ပြီး ၃ လလောက်ကြာရင် အဲ့ဒီ ကိစ္စက သူ့အလိုလို ပါလာတော့ပါပဲ။ ဒါကို ရည်းစားထားဖူးတဲ့ လူတိုင်း သိပါတယ်" ရည်းစား ၇ ယောက်ထားဖူးသည့် အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးက လိင်ကိစ္စကို ရည်ညွှန်း၍ ပြောပြသည်။ သူမကိုယ်တိုင်လည်း Ecee2 ၁၅ ကဒ်ခန့် သောက်ဖူးကြောင်း ဆက်ပြောသည်။ ယခုအခါ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းများ နေရာအနှံတွင် ရှိနေခြင်းကြောင့်လည်း ယနေ့ခေတ် သမီးရည်းစားများ ၏ ဆက်ဆံရေးမှာ လင်မယားပုံစံ ဖြစ်လာပြီဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားတွင်တော့ ချစ်သူဖြစ်သည်နှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် လွန်ခဲ့နှင့် ရာစုနှစ်များစွာ ကတည်းက ရှိနေခဲ့သည့် ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သော်လည်း မြန်မာပြည်တွင်တော့ ယခုအချိန်အထိ လူကြီးများက လက်မ ခံကြသေးပေ။ လူငယ်ပိုင်းတွင်လည်း တရားဝင် အသိအမှတ် မပြုသေးပါ။ သို့ရာတွင် မြန်မာပြည်၌လည်း ချစ်သူဖြစ်သည်နှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်း တဆက်တည်း ပါလာမည်ကို ဆယ်ကျော်သက်များက အလိုလို လက်ခံထားကြသည်။ တိုးတတ် လာတယ်ပဲပြောမလား။ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပျက်သွားပြီပဲ ပြောမလား။ ဒီခေတ် သမီးရည်းစားတွေ လိင်ဆက်ဆံတာကို လက်ခံရတော့မှာပါ" အယ်ဒီတာတစ်ဦးက မှတ်ချက်ပြု သည်။ ခေတ်၏ ပြောင်းလဲလာမှုနှင့် အတူ သမီးရည်းစားအချင်းချင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းကို လူငယ်များတွင် သာမက အသက် ၄၀ ခန့် လူကြီးပိုင်းတွင်ပါ တွေ့လာရသည်။
"ကျနော်တို့ ဟိုတယ်ကိုတော့ အသက်ကြီးပိုင်းစုံတွဲတွေ တော်တော်လာတယ်" ဟု ရန်ကုန်မြို့ ဆိတ်ငြိမ်ရပ် ကွက်အတွင်းမှ ဟိုတယ်တွင် လုပ်ကိုင်သည့် ကိုရဲက ဆိုသည်။ သူတို့သည် အချိန်ပိုင်း လာရောက် သူများဖြစ်သည်။ လူကြီးပိုင်းများအတွက် မိမိကိုယ်ပိုင် အလုပ်အကိုင်နှင့် ပြဿနာ မရှိနိုင်သော်လည်း ကျောင်းနေအရွယ် မိန်းကလေးများ တည်းခိုခန်းနှင့် ဟိုတယ်များသို့ သွားရောက်နေခြင်းကလည်း မိဘများ အတွက် ရင်ပူစရာဖြစ်နေသည်။ တက္ကသိုလ် တတ်နေသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်း သားများ အခြင်းခြင်း ချစ်ကြိုက်ပြီး လိင်ကိစ္စ ပါလာသည်ကလည်း မဆန်းတော့ပါ။
အရှေ့ပိုင်း တက္ကသိုလ်မှ သင်တန်းရေးရာ ဌာနမှူးက ကျောင်းသူကျောင်းသား အချင်းချင်း စာသင်ခန်း အလွတ်များထဲတွင်ပင် လိင်ဆက်ဆံမှုများ ရှိကြောင်း ယမန်နှစ်က ထုတ်ဖော်ပြောဖူးသည်။ ယင်း ဆရာက "မိန်းကလေးက အကွဲတွေ ၀တ်ထားတယ်။ အကောင်တွေက လုပ်ချင်ရာလုပ်ပဲ။ အဲ့လို လုပ်နေတုန်း ဖမ်းမိတာ ခဏခဏပဲ။ ဒါကြောင့် အ၀တ်အစားတွေကို လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ဖို့ စည်းကမ်းထုတ်ထားတာ" ဟု ဆိုသည်။
ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းတတ်ရောက်ခဲ့ဖူးသူ သတင်းထောက်တစ်ဦး "( ) တည်ခိုခန်းက ကျနော် တို့ကျောင်းသားတွေ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ဆောက်ထားပေါ့" ဟု ပြောသည်။ ယင်းတည်းခိုခန်းသည် ယခင်က သစ်သား အဆောက်အဦးသာ ဖြစ်သော်လည်း ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အသွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ယခုကဲ့သို့ ကွန်ကရစ် တိုက်နှင့် ဖြစ်လာကြောင်း ယင်းက ပြောပြသည်။ ထို့အတူ အတန်းပြီးချိန်နှင့် စာသင်ခန်း အလွတ်များ ကလည်း စုံတွဲများအတွက် လွတ်လပ်စွာ ကျက်စားရာနေရာ များ ဖြစ်နေကြောင်း ယင်း သတင်းထောက်ကဆိုသည်။ ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဟိုတယ်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ အခြား တစ်ဦးကတော့ "အဖြူ၊ အစိမ်း ၀တ်ထားတဲ့ ကျောင်းသားနဲ့ ကျောင်းသူ စုံတွဲနှစ်တွဲ လာဖူးတယ်" ဟုဆို သည်။
စန်းစန်းကတော့ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမကတော့ သူမရည်းစားနှင့် နောက်တစ်နှစ်ခန့်အကြာတွင် လက်ထပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ လက်ထပ်မည်ဖြစ်သည့် အတွက်လည်း လိင်ကိစ္စကို လိုက်လျောလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ သူမ၏ သူငယ်ချင်းများတွင်လည်း လိင်မထပ်မီ အတူနေခြင်းများရှိကြောင်း ဆိုသည်။ မင်္ဂလာဆောင်ရန် အခက်အခဲရှိနေသော လူများအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ လက်မထပ်သေးမီ အတူနေခြင်းကလည်း ရသေ့စိတ်ဖြေ တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် သမီးရည်းစား ချိန်းတွေ့ရန် ပန်းခြံများ၊ အပန်းဖြေ စရာနေရာများ ရှားပါးလာခြင်း လူငယ် တို့ကို ဟိုတယ်များသို့ သွားလာစရာ လမ်းစဖြစ်နေသည်။ ထို့အတူ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမမှာလည်း ယခင်ကလောက် မရှိတော့ သဖြင့် သမီးရည်းစားများ ဘုရားသွား၊ ကျောင်းတတ် ပြုမှုလည်း ရှားပါးလာ သည်။ "ရုံးပိတ်ရက်နဲ့ အခါကြီး ရက်ကြီးတွေမှာ အခန်းပြည့်တယ်။ ကြားရက်တွေကတော့ ဧည့်သည် အ၀င် နည်းတယ်" ဟု ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်မှ တည်းခိုခန်း မန်နေဂျာက ဆိုသည်။ ထိုသို့ ပိတ်ရက်များ နည်းတူ ချစ်သူများနေ့ဟု ခေါ်သည့် Velintine Day ကလည်း မိန်းကလေးများကို ပန်းဦးချွေရာ နေ့တပင်။ တည်းခိုခန်းနှင့် ဟိုတယ် တို့၏ ဈေးနှုန်းများမှာလည်း ၃၀၀၀၊ ၅၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀၊ ၂၀၀၀၀၊ ၃၀၀၀၀ ကျပ်ခန့် အထိရှိသဖြင့် လက်လှမ်းမီသော ဈေးနှုန်း များလည်းဖြစ် သည်။ နေရာတိုင်း လိုလိုတွင် အချိန်ပိုင်း တည်းခိုနိုင်သည်။
ထို့ပြင် အပြာကားများ၊ စာများကို ယခင်အချိန်များကလို မဟုတ်တော့ဘဲ အင်တာနတ်တွင်ဖြစ်စေ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း အတွင်းဖြစ်စေ ထည့်သွင်းကြည့်ရှုနိုင်လာခြင်းက ကာမစိတ်ကို အချိန်မရွေးနိုးဆွပေး လာပြီဖြစ် သည်။ နိုင်ငံခြားတွင်တော့ သားသမီး အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်နှင့် လွတ်လပ်စွာနေထိုင် ခွင့်ပေး ထားသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်တော့ သားသမီး အိမ်ထောင် မကျမချင်းသည် မိဘအုပ်ထိန်းမှု လက်အောက်တွင် သာရှိသေးသည်။ သို့ရာတွင်တော့ တစ်နယ်တစ်ကြေးမှ လာရောက် အလုပ်လုပ် ကိုင်သူများ အနေဖြင့်တော့ ၁၈ နှစ် မပြည့်ခင်ကတည်းက မိဘ လက်မှ လွတ်ပြီဖြစ်သည်။
ထိုသို့နယ်မှ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် အဆောင်များတွင် နေကြပြီး အဆောင်၏ အုပ်ချုပ်မှုမှာလည်း သတ်မှတ်ချိန်တွင်း ပြန်မအိပ်ပါက တံခါးပိတ်လိုက်မည်သာဖြစ်သည်။ "ဆယ်နာရီ အဆောင် ပိတ်ချိန်ပါ။ ပြန်မလာလဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်သားသမီးမှ မဟုတ်တာ။ သူ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ သူပေါ့" ဟု လမ်းမတော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဆောင်ဖွင့်ထားသည့် အမျိုးသမီးကြီးက ပြောသည်။ ရုံးပိတ်ရက် များတွင် သူမအဆောင်ရှိ အမျိုးသမီးအချို့မှာ အမျိုးအိမ်တွင် သွားအိပ်သည်ဟု အကြောင်းပြကာ ပြန်မလာ တတ်ကြောင်း တဆက်တည်းပြောသည်။ ယခင်ခေတ်ဟောင်းက အဆောင်များသည် မိဘကိုယ်တိုင် အဆောင် သို့ လာအပ်၊ သားသမီး၏ အဆိုးအကောင်းများကို မိဘထံသို့ အဆောင်မှူးက အစီရင်ခံ၊ အဆောင်များကလည်း စည်းကမ်းတင်းကြပ်။ ထိုခေတ်သည် ကျန်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ထို့အတူ နယ်မှ အလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်သူများနှင့် ကျောင်းလာတတ်သူ အမျိုးသမီးအချို့မှာ ရည်း စားနှင့် တအိမ်ထဲ အတူနေခြင်းများလည်း ရှိလာသည်။ "နှစ်ယောက်အတူတူအိမ်ငှားနေလိုက်တော့ ပြီးတာ ပဲလေ။ အဓိက ကတော့ မိဘတွေ မသိဖို့ပဲ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ယူဖို့တော့ လိုတာပေါ့" နယ်မှလာသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် အိမ်ငှားနေထိုင်သူ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ရန်ကုန်သား ကိုပြည့်စုံကပြောသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့ အမှန်တကယ် တရားဝင် လက်ထပ်မည့် ရက်ကိုတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် မသိသေးကြောင်း ဆိုသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေကြောင့် လူငယ်လူရွယ်များအဖို့ လက်မထပ်မီ အတူအနေခြင်း ဆိုသည်မှာ မဆန်းတော့ ပြီဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အတူနေခြင်းနှင့်အတူ ကိုယ်ဝန်မရအောင် လုပ်ကိုင်ရသည်မှာ လည်း နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့နေ့ သမီးရည်းစားများ၏ အခြေအနေမှာ Ecee2 များ ရောင်းအားကောင်းနေခြင်းက လိင်ကိစ္စကို မီးမောင်း ထိုးပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Ecee2 ဖြန့်ဖြူးသူတို့၏ အဆိုအရ တစ်လလျှင် ကဒ်ရေ ၃၀၀၀၀ ခန့် ရှိပြီး သန္ဓေတားဆေး နောက်တစ်မျိုးဖြစ်သည့် Pill 72 ကတော့ ကဒ်ရေ ၁၅၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ လက်လီဆေး ဆိုင်များတွင်တော့ တစ်ရက်လျှင် ကဒ်ရေ ၅ ကပ်မှ ၁၅ ကဒ်ရှိကြောင်း ဆိုကြသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် တရားဝင်ဆေးဆိုင်ပေါင်း ခန့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် တလလျှင် အရေးပေါ် တားဆေး သုံးဆွဲကြသူပေါင်း ၅ သောင်းကျော်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဆေးပညာအရ အမျိုးသမီး ရာသီမလာမီ တစ်ပတ်၊ လာပြီး တစ်ပတ်အတွင်း လိင်ဆက်ဆံပါက ပုံမှန် အားဖြင့် ကိုယ်ဝန်မရတတ်ဟု ဆိုထားသည်။ ကြားရက်များတွင် လိင်ဆက်ဆံမိပါက Ecee2 ကဲ့သို့ အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေးကို သောက်ရန် လိုမည်ဖြစ်သည်။ အချို့က လိင်ဆက်ဆံတိုင်း ကွန်ဒုံးအ သုံးပြုကြသော်လည်း များသောအားဖြင့်တော့ ကွန်ဒုံးကို ပြည့်တန်ဆာများနှင့် ဆက်ဆံမှသာ အသုံးပြုကြ သည်။ ဆရာဝန်များက သန္ဓေတားဆေးတိုင်းကို အားပေးခြင်းမပြုဘဲ ကွန်ဒုံးသုံးခြင်းသာလျှင် လုံခြုံစိတ်ချ ရကြောင်းပြောသည်။ ထို့ပြင် အရေးပေါ် တားဆေးများမှာ ရာနှုန်းပြည့်ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ၇၉%မှ ၈၅% ထိသာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ဟု ဆရာဝန်တို့က ပြောသည်။
"သမီးရည်းစားဆိုပေမဲ့ ဘယ်လို ပိုးတွေ ရှိမလဲ မပြောနိုင်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ကွန်ဒုံးကို လိင်ဆက်ဆံတိုင်း သုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကိုယ်ဝန်လဲမရ၊ ရောဂါလည်း မရတော့ဘူးပေါ့" နေဆေးခန်းမှ ဆရာဝန်က ပြော သည်။ သို့ရာတွင် လူငယ်တို့၏ အဆိုအရ အလွှာခြားရင် ကမ္ဘာခြားသလို ခံစားရတယ် ဟုဆိုကာ မိမိချစ်သူနှင့်တော့ ကွန်ဒုံး အသုံးပြုမှု နည်းပါးကြသည်။ "ကိုယ်ရည်းစားနဲ့ကတော့ စိတ်ချရတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ကွန်ဒုံး မသုံးဘူး" ဟို အသက် ၂၀ အမျိုးသားက ပြောသည်။ သို့သော် မိန်းကလေး ကိုယ်ဝန် မရအောင် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်ကိုတော့ သူမသိကြောင်းပြောသည်။
ရည်းစားနှင့် လိင်ဆက်ဆံသည့် အကြိမ်ရေများသည့် အမျိုးသမီးများကတော့ တားဆေးထိုးခြင်းနှင့် တစ် လဆေးသောက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြသည်။ များသောအားဖြင့် တစ်လတားဆေးကို အသုံးပြုကြသည့် အတွက် ဆေးခန်း များတွင် တစ်လခံ ထိုးဆေးမှာ အမြဲလိုလိုပြတ်လေ့ရှိကြောင်း ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ နေ တံဆိပ် ဆေးခန်းတစ်ခုက ဆိုသည်။ " တစ်လဆေးက ရွှေထက်တောင်ရှားတယ်" ယင်းဆေးခန်း ဆရာဝန် က ပြောသည်။ သုံးလခံဆေးများမှာ ရာသီလာခြင်း မရှိသည့်အတွက် အသုံးပြုမှုနည်းပါးသည်။
တစ်လခံ သောက်ဆေး OK ကတော့ ကျပ်ငွေ ရာဂဏန်းဖြင့် အလွယ်တကူရသဖြင့် အသောက်များကြ သည်။ သို့ရာတွင် နေ့စဉ် အချိန်မှန်မှန်သောက်ရခြင်းကို အမျိုးသမီးများက မကြိုက်ကြပေ။ ထို့ပြင် သောက် ဆေးကြောင့် ဗိုက်အခေါက်ထူကာ ဗိုက်ပူလာကြောင်း ပုံမှန်သောက်သည့် အမျိုးသမီးများက ဆိုသည်။ ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ပစ္စည်းတစ်ခုခုထည့်ထားခြင်းဖြင့် သန္ဓေတားနိုင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ အချို့ကလည်း မိန်းမကိုယ်အတွင်း သန္ဓေတားပစ္စည်းကို ထည့်ထားကြသည်။
အရေးပေါ်တားဆေးသည် မုဒိမ်းကျင့်ခံရသော အမျိုးသမီးများအတွက် ရည်ရွယ်ကာ ထုတ်လုပ် ထားခြင်ြး ဖစ်သော်လည်း ယခုအခါတွင် အမျိုးသမီးများအတွက် မရှိမဖြစ်အရေး ပါလာပြီဖြစ်သည်။ အရေးပေါ် တားဆေးကို တစ်ဘ၀လုံးတွင် ၇ ကြိမ်ထက် ပိုမိုသောက်မိပါက သားအိမ်ကို ထိခိုက်ပြီးကလေးမရခြင်းနှင့် သားအိမ်ကင်ဆာကဲ့သို့ ရောဂါများကို ရရှိစေကြောင်း ဆရာဝန်များက ဆိုကြသည်။ တားဆေးများမှာ ဆိုးကျိုးများစွာ ရှိသော်လည်း ဆေး မသောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အခြားဆိုးကျိုးတစ်ခုကိုတော့ လူတိုင်း ကြောက်ရွှံ့ကြသည်။
"ယူပြီးလို့ ကလေးရတာ ပြဿနာမရှိဘူး။ ကလေးရလို့ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ရရင် ခွေးဖြစ်ပြီ။ ဒီခေတ်မှာ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်က နည်းတာမဟုတ်ဘူး" ဟု အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် မနေခြည်က ဆိုသည်။ ဆေးမသောက်ခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရရှိလာပါကလည်း တနည်းနည်းဖြင့် ဖျက်ချကြ သည်။ ယခင်ခေတ်ကကဲ့သို့ အရပ်လက်သည်ဖြင့် ထီးရိုးကို သားအိမ်ထဲ ထည့်မွှေခြင်း မဟုတ်တော့ဘဲ ဆေး ထိုးခြင်း၊ ဆေးသောက်ခြင်းနှင့် လေဆုတ်ပြွှန်ဖြင့် ဖျက်ချခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း အန္တရာယ် ကတော့ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
မည်သို့ဆိုစေ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ရှက်စရာကောင်းသည်ဟု လူတိုင်းက ဆိုကြသော်လည်း ကျားမမရွေး ကြိုက်နှစ်သက်သော ကိစ္စဖြစ်ကိုတော့ ကမ္ဘာကြီးတွင် လူဦးရေတိုးပွားလာခြင်းက သက်သေတည်လျက် ရှိသည်။ သိပ္ပံအယူအဆကလည်း လိင်ကိစ္စသည် လူတို့၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ နောင်နှစ်များစွာ မကြာမီ မြန်မာပြည်၌လည်း သမီးရည်းစားများ လိင်ဆက်ဆံသည့် အလေ့အထကို လက်မ ခံခြင်ဘဲ လက်ခံလာရတော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက် သမီးရှင်များအနေဖြင့် စိုးရိမ်နေကြရပြီဖြစ်သည်။
ယောင်္ကျားလေးများအနေဖြင့်လည်း ယနေ့အချိန်အထိ အပျိုစင်ကိုသာ အိမ်ထောင်ပြုလိုသည့် စိတ်ရှိကြေ သ်ာလည်း အပျိုစင်ဘ၀ကို ယောင်္ကျားလေးများကပင် ယူသွားခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်မျိုးဆက် တစ်ခု တွင်တော့ ယောင်္ကျားလေးများ အပျိုစင်ကို တန်ဖိုးထားတော့မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့အတွက် လက်မထပ်မီ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှာ သာမန်ကိစ္စတစ်ခုသာ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ လိင်မထပ်မီ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ပိတ် ပင်ကြမည်လား၊သို့မဟုတ် လက်ခံနားလည်ပေးမည်လားကတော့ အငြင်းပွားပွယ် ကိစ္စတစ်ခု အဖြစ် နောက်ဆယ်စုနှစ် တစ်စုကျော်ထိ ဆက်ရှိနေဦးပါမည်။
စန်းစန်းတစ်ယောက် ဆေးနှစ်လုံးသောက်ပြီးပြီဖြစ်သည့်အတွက် သူမကိုယ် သူမ စိတ်ချသွားပြီဖြစ်သည်။ မနေ့က ရုံးပိတ်ရက်တွင် သူမရည်းစားနှင့် ချစ်ရည်လူးခဲ့သည်များကို စိတ်ကူးယဉ်နေပါလိမ့်မည်။ ညနေတွင် ရုံးဆင်းချိန်တွင် သူမရည်းစားနှင့် ရိုးရိုးသားသား တွေ့ကြမည်ဖြစ်သည်။ သူမသည် ယနေ့ခေတ် မိန်း ကလေး တစ်ဦးဖြစ်သည်။
From : ..စင်္ကာပူဖီးလ်
Credit to myanmar express
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) အဖွဲ့၏ ၁၅ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံအပြီးတွင် လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းသွားရေး သဘောထား ချမှတ်ခဲ့
Postado Friday, December 28, 2012 at 5:56 AM
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) အဖွဲ့၏ ၁၅ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံအပြီးတွင် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းသွားရေး သဘောထား ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ယနေ့ (ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့) တွင် KNU အဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
အဆိုပါ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီကို စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်သွားရန်နှင့် ပြည်သူလူထု၏ နစ်နာမှုများကို အကာအကွယ် ပြုနိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
KNU အဖွဲ့၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂) အသစ်ဖြစ်သူ ပဒိုမန်းမန်းက ''သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့နဲ့ အခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက တင်ပြလာတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ KNU မှာ ဒီလူ့အခွင့်အရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည် '' ဟု ပြောကြားခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်က လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း သပိတ်စခန်းများအား မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က အင်အားသုံးနှိမ်နင်းခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂) ပဒိုမန်းမန်းက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီကို မကြာမီပြုလုပ်မည့် KNU ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းကာ ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပြီးပါက လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း KNU အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အား ပြန်လည်ချပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
KNU အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ''လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၌ အစိုးရအဖွဲ့မှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် လူထုလှုပ်ရှားမှုအား အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်များ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ကို ကြိုဆိုသော်လည်း စိုးရိမ်မှုများရှိနေကြောင်း'' စသည်တို့ ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
KNU အဖွဲ့၏ ၁၅ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့အထိ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံခရိုင် တပ်မဟာ (၇) KNU နယ်မြေတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်းညီလာခံသို့ ကိုယ်စားလှယ် ၁၇၁ ဦးနှင့် လေ့လာသူ ၇၄ ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ စတင်ခါ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စာနယ်ဇင်းသမား များအား ထောင်ချ ထားသော နိုင်ငံများ စာရင်း၌ မြန်မာနိုင်ငံ မပါဝင်တော့သည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့ရာတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ အကျဉ်းချခံနေရသည့် စာနယ်ဇင်းသမား ဦးရေမှာ အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိနေသည်ဟု နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက နှစ်ပတ်လည် ကောက်ယူသည့် စာရင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ “အရပ်သား အုပ်ချုပ်မှုသို့ သမိုင်းဝင် ကူးပြောင်းလာမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် လွန်ခဲ့သော နှစ်အတွင်း လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် များတွင် အကျဉ်းချ ခံထားရသည့် စာနယ်ဇင်းသမား ၁၂ ဦးထက်မနည်းကို လွှတ်ပေးခဲ့သည်” ဟု စာနယ်ဇင်း သမားများ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ (စီပီဂျေ) က ထုတ်ပြန်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မီဒီယာ အခြေအနေသည် ဝေဝေဝါးဝါး ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ “မီဒီယာ အခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုက တိုင်းပြည်ရဲ့ အလုံးစုံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေ ရောင်ပြန်ဟပ် တာပါ။ အခုမှ အစပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အများကြီး မျှော်လင့် ထားလို့ မရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှေ့တိုးနေမယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ကိုကျော်စွာမိုးက ပြောသည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်ကောက်ယူခဲ့သည့် နှစ်ပတ်လည် စာရင်းများအရ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့အထိ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် စာနယ်ဇင်းသမား ၂၃ ဦး ဖမ်းဆီးခံထားရသည်။ ယခင်နှစ်ကထက် ၅၃ ဦး တိုးလာခြင်းဖြစ်ကာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်က စံချိန်တင်ခဲ့သည့် ၁၈၅ ဦးထက်လည်း ကျော်လွန်နေသည်။ တူရကီ၊ အီရန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် စာနယ်ဇင်းသမားများအား အကျဉ်းချမှု အများဆုံးပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံများအဖြစ် စီပီဂျေက ဖော်ပြထားသည်။ အီရီထရာနှင့် ဆီးရီးယား နိုင်ငံများသည် ထိပ်ဆုံးငါးနိုင်ငံတွင် ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံများမှ အုပ်ချုပ်သူများသည် စာနယ်ဇင်းသမား များကို လျှို့ဝှက်နေရာများတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီး တရားစီရင်မှု မရှိသလို၊ ရှေ့နေများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခွင့် မရရှိကြဟု ဖော်ပြ ထားသည်။ ပြင်သစ်အခြေစိုက် နယ်စည်းမခြား သတင်းသမားများအဖွဲ့ (Reporters Without Borders) မှ ထုတ်ပြန်သည့် ၂၀၁၁/၁၂ ခုနှစ် စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့် စာရင်းတွင်လည်း အီရန်၊ တရုတ်၊ အီရီထရာနှင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံများသည် အောက်ဆုံး ခြောက်နိုင်ငံတွင် ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ စာနယ်ဇင်းများအား ပုံနှိပ်ခြင်းမပြုမီ စာပေစိစစ်ရေးသို့ တင်ပြရသည့် စနစ်ကို ယခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် (မပခ) တိုင်းမှူး၏ သတိပေးစာ ပေးပို့ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း အစိုးရဘက်မှ ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တပ်စခန်းများအား လက်နက်ကြီး ပစ်ကူအပြင် စစ်ရဟတ်ယာဉ်များ သုံးစွဲ တိုက်ခိုက်လာသည်ဟု ထိုဒေသရှိ ကျောင်းသား တပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) ABSDF (NB) က ပြောဆိုသည်။
ခရစ္စမတ် အကြိုနေ့မှ စတင်ကာ ယခုအချိန်အထိ အစိုးရဘက်မှ လက်နက်ကြီးများ ဆက်တိုက် ပစ်ခတ်လျှက်ရှိပြီး KIA ဘက်မှလည်း ခုခံတိုက်ခိုက် လျက်ရှိကြောင်း ၎င်း က ဆက်ပြောသည်။
“ KIA ရော၊ ABSDF တွေရော အားလုံးက ရဟတ်ယာဉ်သံကြားတိုင်း KIA ထိပ်လန့်သွေးပျက်နေကြတယ်.. ခရစ္စမတ်နေ့ တနေကုန် ဂမ်ဒေါင်ယန် ဟိုဘက်မှာ ရှိတဲ့ ဂွမ်ရှောင် တပ်ကုန်း၊ မဟာမိတ် KIA ၂၅၅ တပ်ရင်း တပ်စခန်းထိုင်ထားတဲ့ (လိုင်ဇာမြို့နှင့် ၁၂ မိုင်အကွာ) လက်နက်ကြီးနဲ့ ၈၄ မမ၊ ၈၁ မမ၊ ၁ဝ၅ မမ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်၊ လေယာဉ် စစ်ကူနဲ့ ပစ်၊ တပ်ရင်း ၃ ရင်းနဲ့ ခြေလျှင်နဲ့ တက်ထိုး နေတယ် " လို့ ကျောင်းသား တစ်ဦးကဆိုသည်။
အစိုးရဘက်မှ ဗျူဟာ ၃ ခု လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများမှ အင်အား ၅ဝဝ ခန့်ဖြင့် လဂျားယန်ဒေသသို့ တိုက်ခိုက် လျက်ရှိရာ KIA ဖက်မှာ အင်အား ၈၀ ကျော် ကျဆုံးပြီး၊ KIA နှင့် ကျောင်းသား စုစုပေါင်း ၂၀၀ ကျော် လက်နက်ကြီး စ များ ထိမှန်ထားကြောင်း သိရသည်။
မြေပြင်တိုက်ပွဲများသာ မက အင်တာနက်ပေါ်တွင်လည်း ကျချင်ဝဘ်ဆိုက်များကို မြန်မာပြည်သူအချို့မှ DDos နှင့် တိုက်ခိုက်သဖြင့် kachin news ဆိုက်မှာ ယနေ့အချိန်ထိ ၃ ရက်တိုင်တိုင် ဖွင့်မရကြောင်း သိရသည်။
KIA မီဒီယာများတွင် ဆာဗာ တိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့် မြေပြင်တိုက်ပွဲ ကျဆုံး ဒဏ်ရာရမှုများကို ဖော်ပြခြင်း မရှိပဲ အစိုးရ ရဟက်ယဉ် အကြောင်းကို အသားပေးဖော်ပြလျှက်ရှိပြီး ပျက်ကျကြောင်း သတင်းများ လွှင့်လျှက် ရှိသေည်။ အထောက်အထား၊ ဓာတ်ပုံ တစုံတရာ ဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပဲ ရုရှားစစ်တပ်မှ ရဟက်ယဉ်များ ပုံဖြင့် ဝါဒါ ဖြန့်နေကြောင်း သိရသည်။
Copy From Myanmar Express